Clapper: Responsive GUI ပါသော GNOME Media Player | Linux မှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ကွဲပြား၌တည်၏ GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များ, တူညီတဲ့လယ်ပြင်၌အပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးများသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်။ နှင့်အတိုင်းအတာ မီဒီယာဖွင့်စက် ခြွင်းချက်မရှိပါ။ ထိုအဘို့, ဒီနေ့ငါတို့ခေါ်နောက်ထပ်တ ဦး တည်းစူးစမ်းလေ့လာပါလိမ့်မယ် "ကလစ်".
"ကလစ်", ဒါဟာဖြစ်ပါသည် GNOME အတွက်ရိုးရှင်းသောနှင့်ခေတ်မီမီဒီယာဖွင့်စက် ၎င်းသည်၎င်း၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတင်းများကြောင့်သိမှု၊ ကြိုးစားခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကိစ္စများစွာတွင်အကြံပြုခြင်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။
နှင့်ပုံမှန်အတိုင်းအထဲသို့အပြည့်အဝမဝင်ခင် ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကျနော်တို့လင့်များချက်ချင်းထားခဲ့ပါလိမ့်မယ် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များအမှု၌မည်သူမဆို၏နယ်ပယ်သို့စူးစမ်းလိုသည် မီဒီယာဖွင့်စက် အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တယ်
"DeaDBeeF (0xDEADBEEF ၌ကဲ့သို့) သည် GNU / Linux၊ * BSD, OpenSolaris, macOS နှင့်အခြား UNIX ကဲ့သို့သောစနစ်များအတွက် modular audio player ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် DeaDBeeF သည်အသံဖိုင်အမျိုးမျိုးကိုဖွင့်ရန်၊ ၎င်းတို့အကြားပြောင်းလဲရန်၊ သင်လိုချင်သည့်နည်းလမ်းအတိုင်းအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်နှင့်သင် ထပ်မံ၍ ချဲ့ထွင်ရန်အပိုဆောင်းပလပ်ဂင်များစွာကိုခွင့်ပြုသည်။" DeaDBeeF: သေးငယ်သော၊ Modular၊ စိတ်ကြိုက်အသံဖွင့်စက်
နားကြပ် - YouTube နှင့် Reddit မှဂီတဖွင့်နိုင်သည်
1 Clapper - GJS နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ GNOME media player
1.1 Clapper ဆိုတာဘာလဲ
Clapper - GJS နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ GNOME media player
သင့်ရဲ့အဆိုအရ GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, "ကလစ်" es:
"GTK4 ကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့်အတူ GJS သုံးပြီးတည်ဆောက်ထားသော GNOME မီဒီယာဖွင့်စက်။ မီဒီယာဖွင့်စက်သည် GStreamer ကိုမီဒီယာနောက်ခံအနေဖြင့်အသုံးပြုပြီးအရာအားလုံးကို OpenGL မှတဆင့်ပြုလုပ်သည်။"
ဟာ့ဒ်ဝဲအရှိန်ဖြေ - ဟာ့ဒ်ဝဲအရှိန်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်သုံးတယ်၊ CPU နဲ့ RAM အသုံးပြုတဲ့အခါရရှိနိုင်တယ်။
floating mode ကိုဖြေ - ဒါကနယ်စပ်မဲ့ ၀ င်းဒိုးတစ်ခု၊ ခေါင်းစဉ်မရှိဘဲကစားသမားထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချထားတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်တယ်။ floating mode ကို activate လုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အလုပ်များစွာကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အလိုက် GUIဖြေ - ဒီဗီဒီယိုတွေကို Window Mode မှာကြည့်တဲ့အခါ၊ GTK widgets အများစုကို Operating System ရဲ့အသွင်အပြင်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုပြင်မထားဘူး။ "Full Screen Mode" ကိုဖွင့်သောအခါ GUI ၏အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်ပိုမိုမှောင်လာပြီးပိုကောင်းသောမြင်ကွင်းသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်ပိုပွင့်လင်းမြင်သာလာသည်။
ဖိုင်များမှတဆင့်ဖွင့်စရာစာရင်းဖြေ - Flatpak ဗားရှင်းအတွက်သာလျှင်၊ သုံးစွဲသူ၏“ ဗီဒီယို” လမ်းညွှန်မှအကြောင်းအရာအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအကန့်အသတ်ရှိသည်။ ၎င်းသည် playlist ဖိုင်များကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည် (.claps file extension နှင့်အတူပုံမှန်စာသားဖိုင်) ။ ၎င်းတို့တွင်လိုင်းတစ်ခုစီအတွက်ဖိုင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုသာပါဝင်ရမည်။
အခြားအရေးကြီးသော- အခန်းများတွင်တိုးတက်မှုပြဘားနှင့် MPRIS အတွက်ပံ့ပိုးမှု (မီဒီယာဖွင့်စက်၏အဝေးထိန်းမျက်နှာပြင်ဖော်ပြချက်) ။
ထဲမှာ FlatHub မှ« Clapper »၏တရားဝင်အပိုင်း အောက်ပါအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ဖေါ်ပြထားသည် -
"Clapper သည် GTK4 ကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့်အတူ GJS ကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ထားသော GNOME မီဒီယာဖွင့်စက်ဖြစ်သည်။ မီဒီယာဖွင့်စက်သည် GStreamer ကိုမီဒီယာနောက်ခံအနေဖြင့်အသုံးပြုပြီးအရာအားလုံးကို OpenGL မှတဆင့်ပြုလုပ်သည် အဆိုပါကစားသမား Xorg နှင့် Wayland နှစ် ဦး စလုံးအပေါ်ဇာတိအလုပ်လုပ်တယ်။ AMD / Intel GPU များပေါ်တွင် VA-API ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။"
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုအမှုအဘို့, ငါတို့လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ရရှိနိုင်တိုက်ရိုက် download နည်းလမ်း အဆိုပါ GitHub repository ကိုမှသို့မဟုတ်ကနေတဆင့် OpenSUSE repositoriesဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့တိုက်ရိုက် Flatpak မှတဆင့် download နှင့်တပ်ဆင် သုံးပြီး မင်္ဂလာပါ.
ဤအဆင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့ကိုသာလုပ်ဆောင်ရမည် command ကိုအမိန့် နှင့် voila ကျနော်တို့ရပါလိမ့်မယ် "ကလစ်" တပ်ဆင်ပြီးကတဆင့်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့် Applications မီနူး သို့မဟုတ် terminal (console ကို) က။
တပ်ဆင်နေစဉ်အဆင်ပြေလျှင်၊ "ကလစ်" အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း run ပြီးပြသသင့်ပါတယ် -
မှတ်ချက်ဖြေ "ကလစ်" ပုံမှန်အတိုင်းအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Linux ကို Respin လုပ်ပါ ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linuxအပေါ်အခြေခံပြီးသော MX Linux ကို 19 (Debian 10), ငါတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ပါတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် «Snapshot MX Linux လမ်းညွှန်».
တိုတိုပြောရရင် "ကလစ်" တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် "စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ multimedia player အသစ်" အဘို့အဖွံ့ဖြိုးပြီး Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် GNOME၊ ဒီဟာကလိုက်လျောညီထွေရှိတဲ့ graphical interface တစ်ခု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ခိုင်မာမှုတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကခေတ်သစ်နည်းပညာတွေကိုသုံးပြီးတီထွင်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ GTK4 Toolkit နှင့်အတူ GJS.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Clapper - တုံ့ပြန်မှုရှိတဲ့ GUI ပါတဲ့ GNOME media player